Waxaan ku siin karnaa adeegyo habeysan oo wiishka naylon tayo sare leh leh qaabab kala duwan iyo qeexitaanno sida loogu baahan yahay |
Waxaan ku siin karnaa adeegyo habeysan ee wiishka naylon tayo sare leh qaabab kala duwan iyo qeexitaanno sida loogu baahan yahay
Nylon pulleys waa culeys fudud oo si fudud loogu rakibo joog sare. Wareegyada 'Crane nylon pulleys' ayaa si ballaadhan loogu isticmaalay aaladaha wiishka kala duwan iyada oo ah qaybo ka mid ah wiishashka munaaradaha, si tartiib tartiib ah loogu beddelayo qalabka biraha duugga ah iyo faa'iidooyinkooda gaarka ah. Nylon pulley wuxuu ciyaari karaa nooc qalab ah oo loogu talagalay in lagu beddelo birta caag ah
Asal ahaan: Huai'an, Jiangsu Waxyaabaha: Nylon, PA6 / MC
Magaca badeecada: Farsamaynta nylon wiishka Farsamaynta: wax taaj oo kale duray / shubay sanduuqa / processing CNC
(1) Awood sare, awood u leh inuu qaado culeyska muddo dheer;
(2) Adkaysi wanaagsan, awood u leh qalloocinta iyada oo aan la beddelin, iyadoo la ilaalinayo adkaanta iyo iska caabinta saamaynta soo noqnoqda;
Kartida Bixinta: 3000 gogo 'nylon wiish wiish ah bishiiba
si ballaaran ayaa loogu isticmaalay wiishashka, qashin qubka, wiishashka, wiishka dekedda iyo mashiinno kale oo culus.
Hore: Ku wareeji wershadaha si ay u soo saaraan giraangiraha hagaha naaska leh ee tayo sare leh
Xiga: Ml nylon slider-noloshiisu waa tayo sare oo waara
Nylon Flalled Pulleys
Nylon xidhmooyinka goos gooska
Yar yar oo nayloon ah